SilentEye: Zoo faịlụ n'ime ọzọ | Site na Linux
SilentEye bu ihe edere na Qt nke ahụ ga-enyere anyị aka iji Steganography ma zoo ihe oyiyi na ọdịyo n'ime faịlụ ọzọ.
Dị ka Wikipedia:
La steganography Ọ bụ ọzụzụ a na-amụ ma tinye n'ọrụ na usoro nke na-enye ohere izochi ozi ma ọ bụ ihe, n'ime ndị ọzọ, ndị a na-akpọ ndị na-ebu ya, ka a ghara ịmata ịdị adị ha. Ọ bụ ngwakọta nke nka na usoro ndị jikọtara ọnụ wee mebe omume nke zoo na izipu ozi dị nro na onye na-ebu ya nke a na-agaghị ahụta ...
… Isi mmalite okwu a sitere na okwu Greek zoro anyị, nke pụtara ikpuchi ma ọ bụ zoro ezo, na graphos, nke pụtara ide ihe.
Kpachara anya na ngwá ọrụ a, n'ihi na n'ọtụtụ mba na-eji usoro a A machibidoro iwu. Ojiji ya dị mfe.
1- Anyị si na .deb site a url. E nwekwara maka Mac y Windows.
2- Anyị na-etinye ihe ndị a:
3- Anyị na-etinye ngwugwu anyị ibudatara:
4- Ka anyị gaa NchNhr »Ngwa» Ngwa »SilentEye anyi kwesiri inweta ihe dika:
5- Anyị na-adọkpụ ihe oyiyi.
6- Anyị pịa bọtịnụ ahụ Encode.
N'ebe ahụ, anyị nwere ike ịhọrọ ọtụtụ nhọrọ. Anyị nwere ike zoo ozi ma ọ bụ faịlụ ma ọbụlagodi na anyị chọrọ, zoo ya. Dịka anyị nwere ike Zoo faịlụ ma ọ bụ ozi na onyonyo, anyị nwere ike ịme usoro ntụgharị.
Naanị ihe ọjọọ m hụrụ na ngwa ahụ bụ na echekwara ihe oyiyi na ndọtị .BMP na ọdịyo faịlụ dị ka .WAV.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » SilentEye: Zoo otu faịlụ n'ime ọzọ
OH !! waaoo !! Onwe ya, nke a di ka ezigbo uzo iji zoo ihe.
Nwere ike igosi obodo ndị amachibidoro ya na maka ebumnuche ndị a?
Zaghachi na Hetare
Ndewo, ọ gaghị ekwe omume ịzobe ya na ụdị faịlụ ndị ọzọ dị ka mp3 ma ọ bụ avi nakwa na ha nọgidere na-arụ ọrụ. Aghọtara m na site na pusi otu a na-enweta na onyonyo ma ọ bụghị na faịlụ ọdịyo ma ọ bụ vidiyo.